Guddiga Doorashada Madaxweynaha Maamulka Galmudug Oo Doortay. – Kismaayo24 News Agency
by admin 21st January 2020 0105
Magaalada Dhuusamareeb ayaa Maanta oo Talaado ah waxaa kulankii ugu horeeyay ku yeeshay Guddiga Doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo labadiisa ku-xigeen, kuwaasi oo maalin kahor lasoo Magacaabay.
Kulanka Guddiga ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay Arrimo ku aadan diyaar garoowa Doorashada Hoggaanka sare ee Galmudug oo maalmaha soo socda dhici doonta, iyagoona Guddigan doortay Guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxaa laga soo dhex xulay Xikdhibaanada Baarlamaanka, waxaana Doorashada goobjoog ka ahaa Guddoonka Cusub ee Baarlamaanka labaad ee Galmudug.
Guddigan oo ka kooban 13-xubnood ayaa shaqeyn doona Arrimaha Doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo labadiisa ku-xigeen, iyagoona saacadaha soo socda soo saari doona Jadwalka Doorashada.
Warar laga helayo dhuusamareeb ayaa sheegaya in Doorashada Guddoonka Guddiga Doorashada Madaxweynaha khilaaf ka jiro, kaasi oo ku aadan in Ahlusunna ay dalbadeen in mid kamid Xildhibaanadooda laga dhiyo Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxweynaha Galmudug.
Magaalaa Dhuusamareeb ayaa waxaa ka socda ololihii ugu dambeeyay ee Doorashada Madaxweynaha, isla markaana waxaa halkaas ku sugan Musharaxiin badan, kuwaasi oo ku tartamaya Xafiiska Madaxtooyadda Galmudug.
Dalka Kenya oo diiday in damaanad lagu siidaayo.
Dowladda soomalia oo shaacisay goobaha ugu horeeyo ee ciidamada Amisom laga saari doono
War Hada: Maxaadan Ogeyn oo Ciidanka Ammaanka ay Muqdisho ku qabteen???? War ayaan idinkaga heynaa
DEG DEG: Dhageyso Dibad Bax looga soo Horjeedo Xasuuqa Amisom oo Hada ka Socda Deegaanka Buulo Mareer iyo Amisom oo ku…